छोराले विदेशमा राम्रो काम नपाएपछि बुवाले एजेन्टको गोली हानी गरे ह’त्या (सहि वा गलत ?) – Hamro24News
July 5, 2021 adminLeaveaComment on छोराले विदेशमा राम्रो काम नपाएपछि बुवाले एजेन्टको गोली हानी गरे ह’त्या (सहि वा गलत ?)
छोराले विदेशमा राम्रो काम नपाएपछि उनका बुवाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने ‘एजेन्ट’लाई यो’जना बनाएरै गो’ली हानी ह’त्या गरेका छन । कपिलवस्तु कृष्णनगर नगरपालिका-१० का ५५ वर्षीय पारस पुरीलाई गो’ली हा’नी ह¥त्या गरेको
आ’रो’पमा प्र’ह’रीले एक जनालाई प’क्रा’उ गरेको छ । विजयनगर गाउँपालिका-१ का ५० वर्षीय पशुपति कुर्मीलाई प्र’ह’रीले प’क्रा’उ गरेको हो। उनलाई कपिलवस्तु नगरपालिका-१० नेपाल-भारत सिमाबाट प’क्रा’उ गरिएको प्र’ह’री नायब उपरीक्षक धर्मराज भण्डारीले बताए । २०७५
साल चैत १७ गते राति साढे ९ बजे पुरीको गो’ली हा’नी ह¥त्या गरिएको थियो। ह¥त्यापछि भागिरहेका कुर्मीलाई नि’यन्त्र’णमा लिएर सोधपुछ गर्दा आ’रो’पी’को पहिचान खुलेपछि हि’रा’सत लिइएको भण्डारीले बताए । पुरी वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाहरूलाई विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न
थिए । कुर्मीका छोरालाई विदेश पठाइदिने भनेर पुरीले १ लाख १५ हजार रूपैयाँ लिएका थिए । बहराइन पठाएकोमा राम्रो कम्पनी र तलब नपाएको भन्दै कुर्मीले पैसा फिर्ता माग्न थाले ।भण्डारीका अनुसार पटक-पटक पैसा नपाएपछि उनलाई कुर्मीले मा_र्ने योजना बनाए । यसमा कुर्मीसहित तीन जना व्यक्ति प्र’तिवादी छन्। उनीहरूले भारतको सिद्धार्थनगर ढकारी ग्राममा बसेर ह¥त्याको योजना बनाएका थिए।त्यसदिन बेलुका
तिनै जना मोटरसाइकलमा आएर पुरीको घर पुगेका थिए। उनीसँग वा’द’वि’वा’द गर्दै पैसा फिर्ता मागेका थिए। तर, पुरीले पैसा नदिएपछि कटुवा पेस्तोलबाट गो’ली हा’नी ह’त्या गरेको भण्डारीले बताए । गो’ली हानेपछि हल्लाखल्ला भएर गाउँले भेला भएका थिए। गाउँलेलाई ल’क्षित गरी उनीहरूले
वि’स्फो’टक प’दार्थ प’ड्काएर मोटरसाइकल चढेर भागेको भण्डारीले बताए। घ’ट’ना’मा सं’ल’ग्न अन्य व्यक्तिको खोजी भइरहेको उनले बताए। कुर्मीलाई कर्तव्य ज्या’नमु’द्दा’मा अ’नु’स’न्धान थालिएको भण्डारीले बताए ।’सेतोपाटि
खाडीको घामले शुक्रकीटमा ह्रास, खाडीबाट फर्कने २० प्रतिशत पुरुषहरु समस्या देखियो
अर्जेन्टिनाको कप्तान लिओनल मेसी कोपा अमेरिका फुटबल २०२१ को सर्वाधिक गोलकर्ता